Guusha Farmaajo waa guul Shacab - iftineducation.com
iftineducation.com – Maanta waxaa Soomaalida u furmay bog cusub, waxaa la qubay qabyaaladdii gundhigga u ahayd kala qoqobnaanta iyo laaluushkii in dhaha u ahaa siyaasadda Soomaalida. Waxaa la oran karaa Xildhibaanada ka hor Farmaajo shacabkaa u codeeyay.
Isku soo xooriyoo, Farmaajo qabiil ma dooran ee qaran baa doortay, shisheeye ma keensan ee Soomaali baan keensatay, sidaasi darteed kubaddu haatan dhiniciisay jirtaa. Waxaa laga rabaa inuu dalka u xulo dad wanaagsan oo hogaanka la toosiya iyo saaxiibo wanaagsan oo samo-katalis ah. Waa lagama maarmaan in dib loo eego xiriirka aynu la leenahay dalalka Afrikaanka iyo kuwa Carabta. Sidoo kale waa muhiim in la xoojiyo xariirka aan la leenahay Turkiga isla mar ahaantaana dib loo furo cilaaqaadkii dhumay ee inaga iyo Ruush.
Hambalyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha cusub